::: အခြားမိန်းမတစ်ယောက်နှင့် ချိန်းတွေ့ခြင်း ::: ............... ~ Latha Mobile 0945 000 1727
::: အခြားမိန်းမတစ်ယောက်နှင့် ချိန်းတွေ့ခြင်း ::: ...............
Myint Aung shared Ko Ko Swe's photo.
အိမ်ထောင်သက် ၂၁နှစ်ကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော့်ဇနီးဟာ ကျွန်တော့်ကို အခြားမိန်းမတစ်ယောက်ကိုခေါ်၊ ညစာထွက်စား၊ ရုပ်ရှင်သွားကြည့် ပြုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူကပြောတယ်။ “ ကျွန်မရှင့်ကို ချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအခြားမိန်းမဖြစ်သူကလည်း ရှင့်ကိုချစ်နေတယ်၊
နောက်ပြီး သူဟာ ရှင်နဲ့အတူ နေချင်တဲ့အချိန်ရှီလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိနေတယ်” တဲ့။ - ကျွန်တော့်ဇနီးက ကျွန်တော်သွားတွေ့စေချင်တဲ့ အခြားမိန်းမ ဆိုတဲ့သူကတော့ ကျွန်တော့်အမေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမေဟာ မုဆိုးမအဖြစ်နဲ့နေထိုင်လာတာ ၁၉ နှစ်ရှိနေပါပြီ။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော့်မှာ အလုပ်ကတစ်ဘက်၊ ကလေးသုံးယောက်ကလည်းရှိဆိုတော့ အမေ့ဆီကို ရံဖန်ရံခါမှသာရောက်ဖြစ်တာမျိုးပါ။ - အဲဒီနေ့ညမှာပဲ အပြင်ထွက် ညစာစား၊ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့ အမေ့ကို ကျွန်တော်ဖုန်းဆက် ဖိတ်ကြား လိုက်ပါတယ်။ “ ဘာဖြစ်လို့လဲ? ငါ့သားနေမကောင်းဘူးလား?” လို့အမေကပြောတယ်။ သူဟာ တစ်ခုခုကို သံသယဖြစ်နေပုံရပါတယ်။ “မဟုတ်ပါဘူးအမေ၊ အမေနဲ့အတူတူ အချိန်လေးယူပေးရတာ ကောင်းမယ်လို့ ကျွန်တော်တွေးမိလို့ပါ” လို့ ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ “ အမေနဲ့ကျွန်တော် နှစ်ယောက်တည်းပဲ”။ အမေဟာ အတန်ကြာအောင်စဉ်းစားပြီးမှ ပြန်ပြောပါတယ်။ “ အဲဒီလိုဆိုရင် အမေ သိပ်ကြိုက်ပါတယ်” တဲ့။ အဲဒီသောကြာနေ့ အလုပ်ကနေအပြန်မှာ ကျွန်တော်အမေ့ကို ကားနဲ့သွားကြိုတဲ့အချိန်မှာ အမေဟာ ကုတ်အကျီ င်္ကိုဝတ်ပြီး အိမ်ရှေ့တံခါးဝမှာ ရပ်စောင့်နေပါတယ်။ သူဟာ ဆံပင်လေးတွေကို ကောက်ထားပြီး ၀တ်ထားတဲ့အ၀တ်အစားဟာ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမင်္ဂလာပွဲမှာ ၀တ်ဆင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့ပါ။ နတ်သမီးတစ်ပါးရဲ့လင်းရောင်ခြည်တွေလိုဖြာနေတဲ့ အမေ့မျက်နှာက ကျွန်တော့်ကိုပြုံးပြပါတယ်။ “ အမေ့သူငယ်ချင်းတွေကို အမေပြောပြထားတယ်။ ဒီနေ့ သားတော်မောင်နဲ့အတူတူ အပြင်ထွက်မလို့ဆိုတာပြောတော့ သူတို့တွေ အမေ့ကို အထင်တွေကြီးနေကြတယ် သားရယ်” လို့ ကားထဲမှာဝင်ထိုင်ရင်းပြောပါတယ်။ - တော်တော်ကောင်းပြီး ဇိမ်ကျလှတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဆီကို ကျွန်တော်တို့သွားကြပါတယ်။ အမေဟာ ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို ကိုင်ထားတာများဆိုရင် သမ္မတ ကတော် လေလား ထင်ရပါတယ်။ ဆိုင်စားပွဲမှာထိုင်တော့ ကျွန်တော်ဟာ အစားအသောက်စာရင်းကိုကြည့်ပေးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ အမေ့မျက်လုံးတွေဟာ စာလုံးကြီးကြီးမှပဲ မြင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ပါ။ အစားအသောက်စာရင်းကိုကြည့်နေတုန်း တစ်ဝက်လောက်အရောက်မှာ အမေ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ အမေဟာ ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်နေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အမေ့နှုတ်ခမ်းပေါ်ကအပြုံးကတော့ လွမ်းဆွတ်နေတဲ့အပြုံးဖြစ်ပါတယ်။ “ ငါ့သား ငယ်ငယ်လေးတုန်းက menu ကိုဖတ်ပေးခဲ့တာ အမေပေါ့” လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က “ အခုအမေကအနားယူဦး ဒီတစ်ခါသားကို တလှည့် ဖတ်ခွင့်ပြုပါဦး” လို့တုံ့ပြန်ပြောဖြစ်ပါတယ်။ ညစာစားရင်း စကားပြောကြတာမှာ ကျေနပ်နှစ်သက်စရာကောင်းလှပါတယ်။ စကားကတော့ ထူးခြားတဲ့ အကြောင်းအရာမပါပါဘူး။ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့လတ်တလောကြုံတွေ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုသာ ပြောဆိုမိကြတာပါ။ စကားပြောတာကောင်းသွားတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရုပ်ရှင်ကိုမမီလိုက်တော့ပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ အမေ့ကို သူ့အိမ်ပြန်ပို့တော့ အမေကပြောပါတယ်။ “ အမေသားနဲ့ အပြင်ကို နောက်ထပ်သွားချင်ပါသေးတယ်- ဒါပေမယ့်လည်း သားကဖိတ်မှ အမေလိုက်မှာပါ” တဲ့။ ကျွန်တော် ခေါင်းငြိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ - “ ညစာစားရင်း ချိန်းတွေ့တာ ဘယ်နှယ်လဲ?” လို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဇနီးဖြစ်သူကမေးပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ “သိပ်ကိုကောင်းတာပဲကွာ။ အဲဒီလောက် ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ကိုယ်တော့ မတွေးတောမိခဲ့ဘူး”။ - ရက်အနည်းငယ်ကြာအပြီးမှာ ပြင်းထန်တဲ့နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အမေကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးဖြစ်သွားတာကြောင့် အမေ့အတွက်တစ်ခုခုလုပ်ကိုင်ပေးဖို့ရာ ကျွန်တော့်မှာ အခွင့်မသာခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ အချိန်လေးတော်တော်ကြာလာတော့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်က စာအိတ်လေးနဲ့အတူ ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းလေးရောက်လာပါတယ်။ အမေနဲ့ကျွန်တော်အတူတူ သွားခဲ့ကြတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကပါ။ စာအိတ်မှာအတူတွဲပါလာတဲ့ စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ “ အမေဒီစာရင်းအတွက် ပိုက်ဆံကြိုတင်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ အမေ အဲဒီဆိုင်ကိုရောက်ဖြစ်ဦးမယ်၊ မရောက်ဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ မသေချာပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ နှစ်ပွဲစာဖိုးကို ပိုက်ဆံချေခဲ့လိုက်တယ်။ တစ်ပွဲက သားအတွက်နဲ့ နောက်တစ်ပွဲက မင်းမိန်းမအတွက်ပါ။ အဲဒီနေ့ညက အမေ့အတွက် ဘယ်လောက်အဓိပ္ပါယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ငါ့သားသိချင်မှ သိပါလိမ့်မယ်။ မင်းကိုအမေချစ်တယ် သား ။” - အဲဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာပဲ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို အချိန်မီပြောလိုက်ခြင်းဟာ အရေးပါတယ်ဆိုတာရယ် ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့သူတွေကို သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အချိန်ကိုပေးဖို့ဆိုတာ ကို ကျွန်တော် သဘောပေါက်နားလည်လိုက်ပါတယ်။ ဘ၀မှာ မိသားစုထက် ဘယ်အရာကမှ ပိုပြီးအရေးမကြီးပါဘူး။ သူတို့တွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အချိန်ကိုပေးလိုက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုအရာတွေဟာ “နောက်တော့မှ” ဆိုပြီးရွှေ့ဆိုင်းလို့မရတဲ့အရာတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
- A Date with another woman
After 21 years of marriage, my wife wanted me to take another woman out to dinner andamovie. She said, “I love you, but I know this other woman loves you and would love to spend some time with you.” - The other woman that my wife wanted me to visit was my MOTHER, who has beenawidow for 19 years, but the demands of my work and my three children had made it possible to visit her only occasionally. - That night I called to invite her to go out for dinner andamovie. “What’s wrong, are you well ?” she asked. She was suspicious of something. “I thought that it would be pleasant to spend some time with you,” I responded. “Just the two of us.” She thought about it foramoment, and then said, “I would like that very much.”That Friday after work, as I drove over to pick her up , She was waiting at the door with her coat on. She had curled her hair and was wearing the dress that she had worn to celebrate her last wedding anniversary. She smiled fromaface that was as radiant as an angel’s. “I told my friends that I was going to go out with my son, and they were impressed, “she said, as she got into the car. - We went toarestaurant that was very nice and cozy. My mother took my arm as if she were the First Lady. After we sat down, I had to read the menu. Her eyes could only read large print. Half way through the entries, I lifted my eyes and saw Mom sitting there staring at me. A nostalgic smile was on her lips. “It was I who used to have to read the menu when you were small,” she said. “Then it’s time that you relax and let me return the favor,” I responded. During the dinner, we had an agreeable conversation – nothing extraordinary but catching up on recent events of each other’s life. We talked so much that we missed the movie. As we arrived at her house later, she said, “I’ll go out with you again, but only if you let me invite you.” I agreed. - “How was your dinner date?” asked my wife when I got home. “Very nice. Much more so than I could have imagined,” I answered. - A few days later, my mother died ofamassive heart attack. It happened so suddenly that I didn’t haveachance to do anything for her. Some time later, I received an envelope withacopy ofarestaurant receipt from the same place mother and I had dined. An attached note said: “I paid this bill in advance. I wasn’t sure that I could be there; but nevertheless, I paid for two plates – one for you and the other for your wife. You will never know what that night meant for me. I love you, son.” - At that moment, I understood the importance of saying in time: “I LOVE YOU” and to give our loved ones the time that they deserve. Nothing in life is more important than your family. Give them the time they deserve, because these things cannot be put off till “some other time.” Credit to English-မြန်မာ စာပဒေသာ။